Qubanaha » Doorashada guddoomiye ku xigeenada oo socota.
Doorashada guddoomiye ku xigeenada oo socota.
Doorashada guddoomiye ku xigeenada 1 aad iyo 2 aad ee golaha shacabka ayaa ka bilaabatay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho, kulanka, ayaa waxaa shir guddoominaya xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ah guddoomiyaha KMG ah.
Guddoomiyaha guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka golaha shacabka xilhibaan Dr C/raxmaan Ducaale Beyle, ayaa sheegay in doorashada labada guddoomiye ku xigeen hal ay la wada dooran doona taa oo micinaheedu yahay in xildhibaanka labo warqadood loo dhiibi doono si waqtiga looga faa’ideysto.
Iyadoo labo santuuq lagu kala ridi doono isla markaana warqadaha labada guddoomiye ay midab ahaan kala duwan yihiin. Waxaana xusid mudan in doorashada si toos ah looga daawado loogana dhageysto warbaahin soomaalida.